Onye isi oche WHO na-agwa nzukọ ndị minista ahụike na ego G20 okwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Onye isi oche WHO na-agwa nzukọ ndị minista ahụike na ego G20 okwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi oche WHO na-agwa nzukọ ndị minista ahụike na ego G20 okwu.
Ọbụna ka anyị na-alụ ọgụ iji kwụsị ọrịa a, anyị aghaghị ịmụta ihe ndị ọ na-akụziri anyị ma jikere maka nke na-abịa.
N'ịbụ nke ụdị COVID-19 Delta chụpụrụ, ikpe na ọnwụ na-arị elu ọzọ n'ụwa niile.
Ọ bụ ezie na ọgwụ mgbochi COVID-19 na-azọpụta ndụ, ha anaghị akwụsị ibufe nje.
Pasent 36 nke ndị bi n'ụwa agbaala ọgwụ mgbochi zuru oke ugbu a. Mana n'Africa, ọ bụ naanị 6%.
Okwu mmeghe nke onye isi oche WHO na nzukọ nke ndị minista ahụike na ego G20 - 29 Ọktoba 2021:
Onye isi ala Daniele Franco,
Onye isi ala Roberto Speranza,
Ndị minista na-asọpụrụ,
Daalụ maka ohere isonyere gị taa.
Eji m n’aka na mgbe e mere atụmatụ nzukọ a nke mbụ, anyị niile nwere olile anya na oria ojoo a ga-akwụsị. Ọ bụghị.
Ọdịiche Delta na-akwali, ikpe na ọnwụ na-arị elu ọzọ n'ụwa niile, gụnyere n'ọtụtụ obodo nke gị.
Ọ bụ ezie na ọgwụ mgbochi na-azọpụta ndụ, ha anaghị akwụsị nnyefe, nke mere na mba ọ bụla ga-anọgide na-eji ngwá ọrụ ọ bụla, gụnyere ahụike ọha na eze ahaziri na usoro mmekọrịta ọha na eze, yana nyocha, ọgwụgwọ na ọgwụ mgbochi.
ụnyaahụ, WHO na ndị mmekọ anyị bipụtara atụmatụ Strategic ọhụrụ na mmefu ego maka ịnweta Covid-19 Ngwa ngwa ngwa ngwa, yana ịrịọ ijeri dollar 23.4 iji jide n'aka na nnwale, ọgwụgwọ na ọgwụ mgbochi na-aga ebe achọrọ ha kacha.
Daalụ maka ịghọta mkpa nke WHOEbumnuche ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ dịkarịa ala 40 pasent nke ndị bi na mba niile na njedebe nke 2021, yana pasent 70 n'etiti 2022.
Iji nweta ebumnuche 40% anyị, anyị chọrọ mgbakwunye nde 550 ọzọ. Nke ahụ bụ ihe dị ka mmepụta ụbọchị iri. Dịka enyi m Gordon Brown na-ekwu, ihe karịrị ọkara ọnụ ọgụgụ ahụ na-anọdụ ala na-ejighị ya na obodo gị, enwere ike ibuga ya ozugbo.
Ọ bụ ezie na obere ìgwè nke mba nwere ụfọdụ adịghị ike, nke anyị na-agba mbọ iji dozie ya.
Mana maka ọtụtụ mba, ọ bụ naanị okwu enweghị oke.